U-Edson Glauber-Iintlungu ziya kusihla ngokwanda kuwe- Ukubala ukuya eBukumkanini
Ukumkanikazi weRosary kunye noxolo ukuze Edson Glauber nge-8 ka-Agasti ka-2020:
Nyana wam, ndikubize ngoThixo, ukuba uviwe. Uninzi lwabantwana bam bahlala bengeva kwiminxeba yam kwaye baneentliziyo ezilukhuni kwilizwi lam, kumazwi am njengoMama.
Uninzi lundithuka ngezono zabo ezoyikekayo nangamazwi ahlabayo, kwaye bayayithandabuza imiyalezo yam, bayilahla kwaye oko kukhokelela uninzi lwabantwana bam kude nenyaniso. Ukuba amazwi am endiwathethayo luthando oluninzi kangaka kwaye nenkxalabo ayonyani, amazwi abo azele yinyani, athethe krwada, engenasisa kwaye ezele intiyo?
Thandazani, thandazani, thandazani kakhulu, buntu abunambulelo, kuba iintlungu ezihlelayo ziyahlela kwaye ziya kuqhubeka zikwenzela, zikwenza ukhuphe iinyembezi ezikrakra ngenxa yokuhlala ulisithulu kwilizwi lam.
Iimbumbulu, amadoda anobuqhophololo kunye namabhodlo aya kuhlasela iCawa eNgcwele, kwaye iRoma itshatyalaliswe ngokupheleleyo. I-Itali iya kusela indebe ekrakra yeentlungu, kuba yonile kakhulu, kodwa ingenguye yedwa; nezinye izizwe ezininzi ziya kutshatyalaliswa ngenxa yokuswela ukholo, ukuthanda nokuhlonipha imisebenzi kaThixo.
Ndibuhlungu, nyana wam, kuba ndithethile kwaye ndikubizele [kwisininzi] kuThixo kwaye andiva; Ndikunike uthando oluninzi, imiqondiso emininzi, ubabalo oluninzi, iintsikelelo ezininzi kodwa kodwa ndideliwe kwaye ndikhubekile. UThixo akonwabanga! … Beka ubulungisa bakhe ngokukhawuleza, kungenjalo kuya kufuneka uthwale ubunzima bengalo yakhe enamandla kunye nobulungisa bakhe ngendlela eyoyikekayo.
Ndikusikelele, nyana wam, nakulo lonke uluntu, egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
← UGisella Cardia - Ukhethwe…
UPedro Regis - Ubuntu ngu… →